Nyocha kwuru ... | Obere Business Social Media
Sunday, June 12, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Bọọlụ Lorraine
Gwa ndị nwere obere azụmaahịa okwu gbasara mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze yiri ka enwekwu mmasị na onye na-ajụ ase ka ha na-amalite ịgbanwe ọrụ ahịa site na ọdịnala gaa na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nsonaazụ anyị mbido sitere na nyocha mgbasa ozi anyị na-egosi na ndị nwe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na-etinyekwu oge na mgbasa ozi ọha na eze kwa ụbọchị. (Spendingmụ nwoke na-etinye ego karịa karịa nwanyị). Nke a bụ mgbanwe dị egwu site na otu afọ gara aga mgbe anyị mere ọmụmụ ihe mbụ anyị.
Ahịrị uhie na agba aja aja na-egosipụta nsonaazụ sitere na nyocha 2010 anyị. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ihe dị ka ọkara nke ndị nwoke na ndị nwanyị niile na-aza ajụjụ maka ọrụ anyị kwuru na ha na-erughị nkeji 30 ụbọchị na soshal midia. N'afọ a, acha anụnụ anụnụ na tii na-egosi n'ụzọ doro anya ngbanwe gaa na oge ọzọ ejiri na netwọk mmekọrịta. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ụmụ nwoke na-akọ na ha na-eji ihe karịrị otu elekere kwa ụbọchị
Ọ bụ ezie na ọ bụ mmasị, ezigbo ajụjụ: Ọ na-arụ ọrụ? Ihe data yiri ka ọ na-egosi na ọ bụ. Ọ bụ ezie na ihe karịrị ọkara ndị nwe ụlọ ahịa na ọmụmụ ihe nke afọ a ka na-egosi ihe ndekọ mgbasa ozi ọha na eze na-erughị 5% nke ahịa ha niile, enwere ụlọ ọrụ doro anya na-enwe ihe ịga nke ọma.
Kedu ihe ha na-eme iji nweta ahịa? Ga-echere ndị fọdụrụ nke data a chịkọtara iji chọpụta.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịnweghị ohere isonye, ​​ugbu a bụ oge dị mma, nyocha ahụ ga-ewe nkeji ole na ole, ndị na-azaghachi ihe na-atọkwu nsonaazụ. Ọ bụrụ na ịmechaa nyocha ahụ, m ga-ezitere gị otu akwụkwọ ọcha ọhụrụ mgbe ebipụtara ya.
Were Survey Ugbu a
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ otu akwụkwọ ọcha site n'ọmụmụ ihe nke afọ gara aga, ị nwere ike ịchọta ya ebe a:
Jun 13, 2011 na 2:54 AM
Nyocha dị ka nke a bara uru ma nyere aka na onye ọ bụla nwere ike isonye ebe ọ bụ na mgbasa ozi mmekọrịta dị ebe niile na onye ọ bụla. Ma mgbe ahụ, agabuola m saịtị metụtara ya nke chịkọtara akụkọ gbasara ọnụ ọgụgụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-eji usoro mgbasa ozi na nsonaazụ ya bụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị na-etinye oge karịa ụmụ nwoke. Agbanyeghị, dịka m na-echeta ọ na-ekwu maka niche ndị ọzọ ọ bụghị maka ebumnuche azụmaahịa dị ka nke a. Daalụ maka ozi ahụ.